Page Not Found ဖြစ်ဖြစ်နေလို့.. — MYSTERY ZILLION
Page Not Found ဖြစ်ဖြစ်နေလို့..
June 2011 edited June 2011 in About Forum
ပေးထားတဲ့လင့်တွေကိုသွားကြည့်ပါတယ်ဗျာ..တစ်ခုမှကိုသွားလို့မရဘူး..အဲလိုကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်နေလို့ပါ.ဘာဖြစ်တာလဲတော့မသိပါဘူး..တစ်ခုနှစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး..အကုန်လုံးလင့်တွေအဲလိုဖြစ်နေလို့ပါ..ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးစေချင်ပါတယ် တကယ်မသိလို့ပါ..အားကိုးလျှက်..
In where and what links ?
ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ဖူးပါတယ်။ ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ refresh ပြန်လုပ်ရင်ရပါတယ်။
အင်း..ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတာနဲ့တူပါတယ်ကြည့်ရတာ..ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်လို့ပြောရအောင်လဲဘန်းကျော်ပြင်ပကပါ..စဉ်းစားရခက်တာကကျန်တဲ့ဆိုဒ်တွေကပေးထားတဲ့လင့်တွေကိုသွားကြည့်တော့ရရဲ့သားနဲ့ဒီMZထဲကပေးထားတဲ့လင့်တွေမှလာဖြစ်နေတာပါ..အကုန်လုံးလိုလိုပါပဲ..သွားကြည့်လိုက်တိုင်း Page Not Found ကြီးပဲလာလာတိုးနေလို့..ဖတ်ချင်တာလည်းမဖတ်ရဖြစ်နေတာပါ..refresh လုပ်ပြီးစမ်းကြည့်တော့လဲထူးမခြားနားပါပဲ..ဘယ်လိုကြောင့်လဲတော့မသိပါဘူး..
ဒါဆိုမပြောတက်ဘူးဗျ။ region ကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်တာပဲ။ DNS cache ကြောင့်များလာမသိဘူး။ လိုရမယ်ရ browser cache တွေတွေကိုတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြီး ပြန်စမ်းကြည့်ပါလားခင်ဗျာ။ ရလိုရငြားပေါ့
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုရယ်..မေးရင်းနဲ့ပဲထပ်ပြီးမေးလိုက်ပါရစေ..ကျွန်တော်ကအဲလောက်ထိနားမလည်လို့ပါ..ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် browser cache ကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတာဖြေကြားပေးစေချင်ပါတယ်..အဲလောက်ထိနားမလည်သေးလို့ပါ..မွေးကင်းစကလေးအဆင့်တောင်မရှိသေးပါဘူးဗျာ..အခုလက်ရှိပေးထားတဲ့လင့်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်နေရတာဒီလိုပါ..ဥပမာ..ပေးထားတဲ့လင့်ကိုသွားကြည့်ရင်မရဘူးလေ.အဲဒီတော့search box မှာသွားရှာလိုက်တယ်.အဲအတိုင်း.၀င်လို့တော့ရပါတယ် အဲလိုလုပ်ရင်..အဲလိုပဲကြည့်ကြည့်နေရပါတယ်..
June 2011 edited June 2011 Moderators
ဟုတ်ကဲ့ firefox ဆိုရင်တော့ tools ထဲက clear recent history မှာ select all ရွေးပြီး နှိပ်လိုက်ပါ။
ဒါက browser cache ပါ။ DNS cache ဆိုရင်တော့ အောက်ကလင့်အတိုင်းစမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ရဘူးဂျာ..browser cache ရော dns cache ရောအကုန်လိုက်ရှင်းထားတယ် ..ရဘူး..ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အကို့ဆီသာပြေးလာလိုက်ချင်တော့တယ် အဟီး..တကယ်..
June 2011 edited June 2011 Administrators
ဘယ် link တွေ ဝင်မရတာလဲ။ link လေးပေးပါလား။ MZ website ထဲမှာ ဖြစ်တာလား ? အခြား link က ဖြစ်တာလား ? Google က ရှာလို့ ရလာတဲ့ link ဆိုရင်တော့ အရင် website အဟောင်း link ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဟုတ်ကဲ့ အကို..MZ ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေတာပါ..ကျန်တဲ့ဆိုဒ်တွေကိုပေးထားတဲ့လင့်တွေကိုကျွန်တော်သွားလို့ရပါတယ်..MZ ထဲကိုပြန်ပေးထားတဲ့လင့်တွေကိုသွားလို့မရပါဘူး..ဥပမာ..အသစ်အသစ်သောITသတင်းများ..ကွန်ပျုတာလောကထဲကဟာသ အဲဒါတွေကိုသွားလို့မရပါဘူး..http://www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php?t=431
This page has been removed from the site or unpublished. Maybe, one of moderator of mysteryzillion has removed this page.
အင်း အခုတော့ ကျွန်တော်သဘောပေါက်စတော့ပြုလာပါပြီ။ အဲဒီလင့်တွေဟာ MZ အရင်တုံးက Vbulletin တုံးက လင့်တွေပါ။ အခု vanilla ပြောင်းလိုက်တော့ အဲဒီလင့်အဟောင်းတွေဟာ သုံးလို့မရတော့ပါဘူး။
တိန်..အဲလိုဆိုရင်အဲဒီလင့်တွေကသွားလို့မရဘူးပေါ့..တော်တော်များများရှိတယ်အကိုအဲလိုမျိုးလင့်တွေ Page not found ဖြစ်တာနဲ့404 page not found ရယ်နဲ့တော်တော်များတယ် သွားလို့ကိုမရတာ..သွားလိုက်ရင်အဲလိုတွေချည်းပဲ..ကျွန်တော်ကဆိုဒ်ကိုအခုမှရောက်တာဆိုတော့ အရင်ဆိုဒ်အဟောင်းကိုသိဘူးလေ..